. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: နားစွဲနေသောစကားလုံးများ
ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ဘူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ် .. သားက ငယ်ငယ်က သူများပစ္စည်းတွေယူယူလာတတ်တယ် .. အမေလုပ်သူက ဘာမှဆိုဆုံးမခြင်းမရှိဘူး .. ငယ်ငယ်တည်းက သူများပစ္စည်းယူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူက ကြီးတော့ သူခိုးဖြစ်ရော .. နောက်ဆုံးကျတော့ ဘုရင်ကဖမ်းမိ .. အဆုံးသတ်ကျတော့ တောင်စွယ်နေကွယ်ရင် သတ်စေပေါ့ .. မသေခင် သားလုပ်သူက အမေကိုပြောတယ် .. သားနားကိုခဏလာပါ .. တိုးတိုးပြောစရာရှိတယ်တဲ့ .. အမေက နားနားကပ်ပြီးသားပြောတာနားထောင်တော့ သားလုပ်သူက အမေ့နားရွက်ကို ကိုက်ဖြတ်ပါလေရော .. ပြီးတော့ပြောတယ် .. အမေ သားငယ်ငယ်က ဆိုဆုံးမတာမရှိလို့ သူခုလို သူခိုးဖြစ်ပြီး သေဒဏ်သင့်ရတယ်ပေါ့ ..
ဒီဇာတ်လမ်းကို ငယ်ငယ်တုန်းက တီဗွီမှာလာတာကြည့်ဘူးတယ် .. နောက်ပိုင်း အမေက ပြောဆိုဆုံးမလို့ ကျမတို့မောင်နှမ နားထောင်ဘူး ကလန်ကဆန်လုပ်ပြီဆို အမေပြောလေ့ရှိတာက "နားရွက်ကိုက်ဖြတ်ခံရတဲ့ မိန်းမကြီးလိုဖြစ်မှာစိုးတယ်"တဲ့ .. ဒါကြောင့်ပြောဆို ဆုံးမနေရတာတဲ့ .. ဒီစကားက ခုထိ ကျမနားထဲစွဲနေတဲ့စကား .. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မဖြစ်မနေမို့လို့ နားထောင်ခဲ့ရတယ် .. ခုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆုံးမထားတဲ့ စကားတွေ ကြားယောင်မိတိုင်း မေကြီးကို ကျေးဇူးတင်မိတယ် .. ခုထိလည်းဆုံးမရင် သိပ်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ လက်ခံတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့လည်း ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီး အမြဲနာခံတတ်ခဲ့တယ် .. နည်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းခံ မနာခံတိုင်းလည်း စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး မဖြစ်မနေ ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့ မေကြီးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
နောက်ပိုင်း အသက်အရွယ်အရ သစ်ရွက်လှုပ်ရင်တောင် ရင်ခုန်တတ်တဲ့အရွယ်မျိုးကျပြန်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းတတ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် စကားတွေနဲ့ဆုံးမတတ်ပြန်ပါတယ် .. "ကိုယ့်ကိုယ့်တန်ဖိုးထားမှ သူများက တန်ဖိုးထားမယ်"တဲ့ .. ကိုယ်တိုင် အမြင့်ကိုရောက်ဖို့အရင်ကြိုးစားပါ .. အချိန်တန်ရင်တော့ ယောကျာင်္းတယောက် ရမှာပဲ .. ဒီအတွက်ပူနေစရာမလိုဘူးတဲ့ .. ကိုယ်အဆင့်အတန်းနဲ့လိုက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေ လိုက်ဖက်မယ့်သူတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ ..
အဲဒီတုန်းကတော့ သမီးကလည်း ယောကျာင်္းလိုချင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကတ်ကတ်လန်ပြောဖူးခဲ့တာပဲ .. တကယ်တန်းခုနေစဉ်းစားမိတော့ မိခင်တယောက်က သမီးတယောက်အပေါ်ထားတဲ့ ဂရုဏာဒေါသ၊ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာ၊ အကာအကွယ်ပေးလိုတဲ့ စိတ် တွေနဲ့ ဒီစကားထွက်လာခဲ့တာပဲလို့ စဉ်းစားမိတယ် .. မိခင်တိုင်းက ကိုယ်သာအနာခံလိုက်မယ် ကိုယ့်သားသမီးကိုတော့ စိတ်ရော လူရော နာကျင်မှာစိုးတတ်တာပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ကျမလို မီးဆိုတာပူတယ်လို့ ဘယ်သူက ဘယ်လိုပြောပြော ဟုတ်ရဲ့လား သေချာအောင် စမ်းသပ်ချင်စိတ်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်အပူလောင်မှ သြော် ပူတာပဲလို့ လက်ခံတတ်တဲ့စိတ်ရှိသူကိုတော့ ဒီလိုနည်းနဲ့ နာအောင်ပြောမှ မှတ်မယ် နာမယ်ဆိုတာ မေကြီးစိတ်ထဲက သိနေပါလိမ့်မယ် .. ခုတော့ ဒီစကားအတွက် ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ် ..
လုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်ရတော့မယ် .. ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ထည့်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာလည်း အမေက ကျမကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် .. ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ် ကိုယ့်အတောင်ကိုယ်ဖွင့်ပြီး သွားခိုင်းခဲ့တယ် .. ဒါပေမယ့် ရှေ့လျှောက်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နိုင်တယ် .. ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးထားပြီး ကျော်ဖြတ်သင့်တယ် .. ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် အမေတို့ အိမ်ကတော့ သမီးအတွက် အမြဲတမ်းအဆင့်သင့်တခါးဖွင့်ထားမယ့်အိမ်ပဲလို့ စကားလုံးနဲ့တမျိုး အပြုအမူနဲ့တဖုံ ပြသခဲ့တယ် .. တကယ်တမ်းခွဲရမယ့်အချိန်မှာတော့ ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့တယ် .. အဲဒီညကိုလည်း ကျမဘယ်တော့မှ မေ့လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး ..
"ပျားသာအစဉ်ချိုတယ် လူအစဉ်မချိုဘူး"တဲ့ .. လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ လူ့စရိုက်မျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်လို့ ဒီလူ့ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရင်ရဲရမယ် စိတ်ချမ်းသာရင် စိတ်ချမ်းသာရမယ် .. ဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကလည်း တည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူး .. သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း လူတန်းစားမျိုးစုံနဲ့ အဆင်ပြေအောင်နေရမှာပဲ .. ခု ချစ်ခင်နေတယ်ဆိုရင်တောင် တချိန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲကွာတာမျိုး ရန်ငြိုးဖွဲ့ အမုန်းပွားတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ် .. ဒီလိုအခါမျိုးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ထားတတ်အောင်နေရမယ် .. မွေးကတည်းက တယောက်တည်းဖြစ်လို့ သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေရဘူး ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်မျိုး ကျမမှာ ကိန်းအောင်လာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ် .. ဒါက စေတနာ မေတ္တာတွေရဲ့ စွမ်းအားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်တယ် ..
မိခင်တယောက်အတွက် ရေးပေးတယ်ဆိုတဲ့စာက အဲဒီမိခင်ရင်ထဲက စေတနာ မေတ္တာ ချစ်ချင်း ဘာတခုနဲ့မှ အပြည့်အ၀ နိုင်းယှဉ်ဖော်ပြနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး .. အမေပြောတတ်တဲ့စကားတခွန်းရှိသေးတယ် .. "မိခင်နေရာ မရောက်သရွေ့ မိခင်ရဲ့ စိတ်ထားကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး"တဲ့ ..
အားလုံးပဲ အချိန်ရှိတုန်းလေး မိခင်ရင်ခွင်ကို တန်ဖိုးထားကြရအောင်နော် .. အဝေးရောက် သားသမီးတွေ အကုန်လုံး တောင့်တတဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်ကို အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ကြပါစေ .. အားလုံးပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့ကြလေသတည်းပေါ့ ..း)
မှတ်ချက် - အမေများနေ့အတွက် အမှတ်တရ
ရေးသားသူ moekhar at 5/09/2009 05:30:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ခံစားချက်, ဘ၀, အမှတ်တရ